YAA LA AAMINAA: Culimada iyo Siyaasiyiinta..? (Yaabka-Yaabkiisa iyo Yaab kasii darran- Qormo) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Qormooyinka/YAA LA AAMINAA: Culimada iyo Siyaasiyiinta..? (Yaabka-Yaabkiisa iyo Yaab kasii darran- Qormo)
Jaha-wareerka iyo Yaabka dhacdooyinka Somaaliya adigoo la yaaban ayey mid kasii yaab badan ku halmaansiinee tii hore, kuna gaarsiinee; Tagto daa ee Timaado qabo. Sida;
A. Asbuucii inaga dhamaaday kii ka horeeyay waxaa baraha bulshada Somaalida hareeyay Liis lala yaabay oo ay ku qoran yihiin magacyo Siyaasiyiin Caan ka ah Somaaliya oo haya Xilal sare oo lagu sheegay in ay la shaqeyn-jireen Taliskii hore ee Tegreega Ethiopia, iyada la is waydiinayo sidee ayey ku dhici kartaa? Yaa xaqiijiyey? Maxeyse tahay talaabta laga qaadayo haddii ay dhacday?. Ayey ka yaab badisay;
B. Dhacdadii Gaalkacyo ee lagu Qarxiyey Wadaadkii Mawlaca ku lahaa ee lagu laayey isaga iyo Xertiisii? Waxaa kasii Yaab badneed markii Hay’adda Culimada Somaaliyeed ku Fatwootay in uu Diinta ka baxay Wadaadku iyaga oo aan keenin Xujo cad? Xagey ka gelayaan Hadalkii Rasuulka NNKH “Qalbigiisa miyaad Jeexdeen” iyo Hadalkii Sayid Cumar uu ku yiri Ciidankii Muslimiinta “Ha gelina Kaniisadaha iyo Mawlacyada Wadaada Diinta”? Waxaa kasii yaab badneed;
C. Xildhibaanno Qaranka u dhaartay oo qoray Warbixin lagu Canbaareynayo Dalka iyo Dawladda, lana doonayay in aan weligeen ku jirno safka hore ee Liiska Musuqa Adduunka? Waxaa kasii yaab badneed in Xizbiga UPD uu difaacay Xildhibaanadaas, uuna rabo in aan la kala dirin kadib markii ay lumiyeen kalsoonidii: Dadka, Dawladda, Guddoonkooda, Aqlabiyadii Tirada Guddigooda, Baalna mareen Sharcigii Barlamaanka? Waxaa kasii yaab badneed in ay rabaan xod-xodashada Gudoomiyaha Barlamaanka iyo soo dhawayntiisa, sidii soo dhawayntii Madaxweyne Waare markii uu Kismaayo kasoo degay? Waxaase ka yaab badan;
D. Xildhibaanada Koofur-galbeed ee uu hor kacayay Sh. Aadan Madoobe oo Shacabka Koofur-galbeed ku kicinayay in ay ka hortagaan Ciidamada ka socday Dawladda Federaalka oo ay Xildhinaanno ka yihiin, Naftoodana ku ilaaliyaan Xamar iyo Baydhaba? Waxaase kasii yaab badan in ay isku dirayaan Shacabka iyo Dawladdii ay ka tirsanaayeen? Una qaylinayaan Beesha Caalamka iyo Ciidamo Shisheeye?
“Waxaa yaab leh in Aboor dhisay Dudumaha dhee-dheer, waxaa ka yaab badan in uu Habeen dhisay, waxaa ka yaab badan in uu Candhuuf-tiisa ku Qasay Ciida”
( اثنان اذا صلحا صلحت الأمة واذا فسدا فسدت الأمة: العلماء والأمراء)
Wasiirka Amniga K/Galbeed: "Anaga ayaa dalbanay Ciidamada dowladda, kuwa kalena wau imaan doonaan Baydhaba.."